आइपीएल १० का सबैभन्दा महंगा खेलाडी बने बेन स्टोक्स
९ फागुन, काठमाडौं । इंग्लिस अलराउण्डर बेन स्टोक्स आगामी अपि्रल ५ देखि सुरु हुने इण्डियन पि्रमियर लिग क्रिकेट आइपीएलको दशौं संस्करणमा सबैभन्दा महंगा खेलाडी बनेका छन् । भारतको बैंगलुरुमा आज भएको खेलाडी अक्सनमा स्टोक्सलाई पुनेले १४.५ करोडमा किनेको हो । इंग्ल्याण्डका लागि उनले गत सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । खेलाडी अक्सनमा दोस्रा महंगा खेलाडी पनि इंग्ल्याण्डकै बने...
विराट औद्योगिक प्रदर्शनीको तयारी पूरा
९ फागुन ,बिराटनगर । विराटनगरमा आयोजना हुने कृषि तथा औद्योगिक प्रर्दशनी ‘बिराट एक्स्पो’को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उद्योग संगठन बिराटनगरले जानकारी दिएको छ । एक्स्पोको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने तया भएको छ । फागुन ११ देखि सात दिने ‘बिराट एक्स्पो आयोजना हुँदैछ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि आवश्य...
‘दर्पण छाया २’को ‘तरङ्ग नौलो’ बोलको गीत सार्वजनिक
साहरा फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘दर्पण छाया २’ फागुण २७ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्र अहिले चर्चामा रहनुको मुख्यकारण, यसको नाम पनि हो । १२ बर्ष अगाडि निर्माण भएको चलचित्र ‘दर्पण छाया’ सुपरहिट भएकाले पनि ‘दर्पण छाया २’ चर्चामा रहेको हो । चलचित्रमा समावेश एक रोमान्टिक गीत रिलिज गरिएको छ । गीतमा चलचित्रकी मुख्य नायिका साहारा कार्कीलाई फिचरिङ...
९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १४ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको दोस्रो बैठकले सत्तारुढ दलहरुको भागवण्डाका आधारमा राजदूतहरुको नाम सिफारिस गरेको हो । को-को भए राजदूत ? सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीबाट युवनाथ लम्साल डेनमार्क, लक्की शेर्पा अष्ट्रेलिया, महेन्द्रवहादुर सिंह साउदी अरब र पदम सुन्दास बहराइनका लागि राजदूत...
नरेश दत्त रावल (जुम्ला) - इन्जिनियरको लाहाछाप लागेपश्चातको मेरो पहिलो औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको जागिर, अनि त्यस अन्तर्गतको पहिलो फिल्ड यात्रा: रारा तालको जिल्ला मुगु अन्तर्गतको रारा गाविस | यो आफैमा मिठो संयोग थियो | २०६९ चैत्र तिर साथीहरुसहित चार जनाको समूह रारा किनार हुँदै रारा गाविसको मुर्मा गाउँमा पुग्यौं | गाविस स्तरको कार्यक्रम संचालनको जिम्मा भएको हुँदा ७, ८, ९ वडा...
चैत १ गतेबाट चुरोट–सूर्ति बिक्रीमा कडाई, यी हुन् ७ व्यवस्था
आगामी चैत १ गतेदेखि जथाभावी रुपमा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न पाइदैन । सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण समयानुकुल, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले विभिन्न ७ बुँदे नयाँ व्यवस्था गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ दफा ११ (६)को व्यवस्था बमोजिम सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि...
पाकिस्तानः १०० बिद्रोही मारिए
फागुन ७ – विद्रोही विरुद्धको अभियानको क्रममा एक सय भन्दा धेरै बिद्रोही मारिएको पाकिस्तानी अधिकारीले बताएका छन् । सिन्ध प्रान्तमा रहेको सुफी सन्त लाल शाहबाज कलनदरको दरगाह अर्थात पवित्र धार्मिकस्थलमा भएको आक्रमणपछि पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीले सुरु गरेको अभियानको क्रममा एक सय भन्दा धेरै बिद्रोहीको ज्यान गएको हो । दरगाहमा बिहीबार भएको आत्मघाती आक्रमणमा कम्तिमा ८०...
विश्व क्रिकेट लिगः हङकङ डच टोलीसँग फेरि हार्‍यो
७ फागुन काठमाडौं । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेदरल्याण्डले हङकङलाई १३ रनले हराएको छ । लगातार दुई जितसँगै डच टोली १० खेलबाट १६ अंकका साथ अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । ११ अंक जोडेको हङकङ तेस्रो स्थानमा छ । नेपाल ८ खेलबाट ६ अंकसहित छैटौं स्थानमा छ । नेदरल्याण्डले प्रस्तुत गरेको ३१५ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली हङकङले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ३०१ रन...
७ फागुन, झापा । केही वर्ष अघिसम्म राजनीतिक दलले आन्दोलन, आमसभा, र्‍याली, कोणसभा, जुलुस, प्रदर्शनलगायतका कार्य गरेर जनताको ध्यान आफूतर्फ आकषिर्त गर्दै आएका थिए । तर, अहिले राजनीतिक दलको शैली फेरिन थालेको छ । र, यसको सुरुवात झापाबाट भएको छ । पुरानै शैलीमा अब जनताको मन जित्ने गाह्रो हुने राजनीतिक दलका नेताले निष्कर्ष निकालेका छन् । र, अहिले उनीहरु विभिन्न रचनात्मक काम गरेर...
अलग भएका मनोज र अन्जु एकसाथ
गायिका अन्जु पन्त र गायक तथा संगीतकार मनोज राजविच केहि बर्ष अगाडि डिभोर्स भयो । मिडियामा यी दुइको घरयासी लफडाका बिषयमा विभिन्न खबरहरु सार्वजनिक भए । पछि, यी दुइले अलग बस्ने निर्णय गरे । प्रेम विवाह गरेका यी दुइको अलग हुने निर्णयले धेरै संगीतप्रेमीहरुलाई चिन्तित बनायो । तर, समय सधै एकनाशको हुँदैन । मनोज र अन्जु फेरि एकसाथ देखिएका छन् । तर, यी दुइ पारिवारिक रुपमा एक भएका भने...
मिल्नै नसक्ने गरी टाढा नजान मधेसी मोर्चालाई प्रचण्डको आग्रह
७ फागुन काठमाडौं । चुनाव घोषणालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीच चर्काचर्की भएको छ । स्थानीय चुनावको मिति घोषणाको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले शनिबार विहान मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएका थिए । बालुवाटारमा बैठकमा दुबै पक्षले आआफ्नो अडानलाई ‘बाध्यता’ भन्दै सुनाएका छन् र, सहमति विना उठेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू एकदमै अप्ठ्यारोमा...
न्युरो सम्बन्धी समस्या आउन नदिन के गर्ने ?
नशासम्बन्धी समस्या बढ्दो अवस्थामा छ । केही वंशाणुगत भएपनि नेपालमा धेरै अस्वस्थ जीवनशैली र खानपानका कारण निम्तिएको देखिन्छ। विश्वका अन्य देशमा कमै हुने तर नेपाल लगायतका दक्षिण एशियाली देशमा हुने समस्या पनि छन् । तीमध्ये च्याप्टेकिरा (न्युरोसिस्टसेरोसिस) एक हो । यो किराका कारण ७० प्रतिशतमा छारे रोगमा देखिनेजस्तै लक्षण देखापर्छ । बाटो छेउमा बेचिने फलफूल र सागपात,...
६४ वर्षको उमेरमा जुम्ल्याहा बच्चा
फागुन ६ – ६४ वर्षिया एक महिलाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन् । यी महिलाले यसअघि सन् २०१२ मा पनि एक बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् । तर लालन पालनमा समस्या भएको भन्दै ती बच्चालाई सामाजिक संस्थाले संरक्षणमा लिएको थियो । अहिले जन्मिएको बच्चाको बारेमा के गर्ने भन्नेबारे नखुलाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उनले एक छोरा र एक छोरीको जन्म दिएकी छिन् । तर...
पाथीभरा भलिबलमा आर्मी र पुलिसको सहज जित
६ फागुन, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा जारी पाथिभरा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लव र नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएका छन् । सदरमुकाम स्थित भानु जन माविको खेल मैदानमा भएको पहिलो खेलमा आर्मीले सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लवलाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गर्‍यो । एपिएफबिरुद्ध आर्मीले २६-२४, २५-१९ र २५-१७ को सेटमा जित हासिल गरेको हो । त्यस्तै आजै भएको...